Ungayisusa kanjani i-Akhawunti ye-Instagram - Winches Club
Susa noma uvale i-akhawunti ye-Instagram
Akunandaba ukuthi kungani ususa i-akhawunti yakho ye-Instagram, isigebenga sezokuxhumana asifuni ukukwenza kube lula kuwe. Uma i-akhawunti yakho iyi ivinjiwe noma ikhiyiwe, ungavele ususe i-akhawunti yakho bese uqala phansi.
Wena ayikwazi ukususa noma uvale i-akhawunti yakho ye-Instagram ngqo kusuka kuhlelo lwakho lokusebenza lwefoni. Ukuze wenze lokhu, kufanele uye kufayela le- ikhasi lokususa i-akhawunti elikhethiwe.
Unenketho yokususa unomphela i-akhawunti yakho Instagram, ungayenza ingasebenzi okwesikhashana. Uma ufuna ukwazi ukuthi ungayenza kanjani enye noma enye, vele ulandele izinyathelo zethu ezilula.
Ungasusa kanjani ikhasi lami le-Instagram?
Ukususa i-Instagram yakho kungunaphakade – uzolahlekelwa zonke izithombe zakho, amavidiyo, abalandeli kanye nemiyalezo – uzolahlekelwa ubukhona bakho enkundleni yokuxhumana.
Uma ngabe yilokhu ofuna ukukwenza, ngakho ake siqale.
Iya ekhasini lokususa i-akhawunti ye-Instagram lapha.
Uma ungakangeni ngemvume kunguqulo yesiphequluli sewebhu, uzokwaziswa ukuthi wenze kanjalo.
Uzokwethulwa ngalesi sikrini:
Khetha isizathu sokuthi kungani ususa i-akhawunti yakho.
Faka iphasiwedi ye-akhawunti yakho bese uqhafaza “Susa unomphela i-akhawunti yami”.
Ngingayisebenzisa Kanjani i-akhawunti yami ukuthi ingasebenzi ?
Khumbula ukuthi akunakwenzeka ukubuyela emuva kusuka ku-akhawunti esuswe unomphela. Uma nje ufuna ukuhlala kude nemithombo yezokuxhumana isikhashana, ukwenza i-akhawunti yakho ingasebenzi kungahle kube yindlela engcono.
Ukwenza kungasebenzi i-akhawunti yakho kusho ukuthi ifihlwe ngokuphelele kubo bonke abasebenzisi be-Instagram, futhi ungayisebenzisa kabusha uma ufuna.
Ungavimbela i-akhawunti yakho kusuka enguqulweni yedeskithophu ye-Instagram:
Xhuma kunguqulo yedeskithophu ye-Instagram ku- instagram.com
Chofoza inkinobho “shintsha iphrofayili” eceleni kwegama le-akhawunti yakho
Chofoza ku- “Yenza i-akhawunti yakho isebenze okwesikhashana” ezansi kwekhasi.
Qinisekisa isizathu sokuthi kungani ufuna ukwenza i-akhawunti yakho ingasebenzi, bese ufaka iphasiwedi ye-akhawunti yakho.
Chofoza ku- Yenza kungasebenzi okwesikhashana i-akhawunti.
Uma i-akhawunti yakho ingasasebenzi, ungayisebenzisa futhi nganoma yisiphi isikhathi. Vele ungene ku-akhawunti yakho njengenjwayelo bese i-akhawunti yakho izobonakala futhi.
Yilokho kuphela okukhona kukho.
Khumbula ukuthi ukucindezela ye-akhawunti yakho ngu unomphela, ngenkathi eyakhe ukwenziwa kungasebenzi kuyinto okwesikhashana. Uma kukhona ukungabaza, sincoma ukuthi umane ungasebenzi i-akhawunti yakho ukuze ukwazi ukuyithinta futhi uma ufisa.